သာသနာလုပ်ငန်း – Full Gospel Assembly
Our Church Founders
Full Time Ministers
Elshaddai Children Home
Full Gospel Assembly အသင်း တော်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ဆောင်သည့်အပြင် ရပ်ဝေးသာသနာပြုခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးသာသနာကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့တွင် ၁၉၈၉ခုနှစ်၌ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပုသိမ်သာသနာတွင် ဆက်ကပ်ခဲ့သော ဆရာမဘေဘီတိုးသည် မြစ်ကြီးနားတပ်ကုန်း ကျမ်းစာကျောင်းတက်ရောက်ရန် ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ဆရာဦးဂင်ကျင့်ဆွမ်းမှ(၃) လခန့်ခေတ္တတာဝန်ခံအဖြစ် ဆက်ကပ်ပေးခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် ဆရာဆွောင် ဇကမ်းဇနီးမောင်နှံအား ခန့်အပ်ကာဆက်လက်လုပ် ဆောင်စေခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဆရာဆွောင်ဇကမ်း ကျမ်းစာကျောင်းတက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် တာဝန်ယူဆက်ကပ်မည့်သူ မရှိတော့ သောကြောင့်ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ(၁)ရက်နေ့တွင် ဆရာဦးကိမ်းခန့်ကျင်း ဦးဆောင် သော စစ်ကိုင်းသာသနာ(ယခင်က ဂျီတီပီမစ်ရှင်နှင့် လက်တွဲ)ကို အသင်းတော်၏သာသနာအဖြစ်သတ် မှတ်ခန့်အပ်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြင်းမူမြို့တွင် မ.ဝ.တဥက္ကဌဖြစ်ခဲ့သော ဗိုလ်မှူးခိုင်ဇပုမ်းမိသားစု အားဖြင့် သာသနာအတွက် မြေကွက်အလှူရရှိကာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင် ဆရာ ဦးစွန်ခိုထန်အားမြင်းမူသာသနာပြုဆရာအဖြစ် ခန့် အပ်စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုမှတဆင့် ၁၉၉၆-၉၇ FGBTC ကျောင်းတော်ကြီး ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကျောင်းတက်ခဲ့သော ကျောင်းသားများမှ အယောက် (၃၀)ကို ၁၉၉၈ခုနှစ်၊ မတ်လ(၄-၁၄)အထိ Team Leader Training သင်တန်းပြုလုပ်စီ စစ်ရွေးချယ်ကာ၁၉၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁)ရက်မှစ၍် အသင်းတော်တည်ထောင်ရေးသာသနာအဖြစ် ဆ ရာမဂျာလေးဦးဆောင်ကာ မန္တလေးသို့လည်း ကောင်း၊ ဆရာမ ဂေါ်လူဘူကိုင်ဦးဆောင်ကာ မြန်မာပြည်အနှံ့နယ်လှည့်ဧဝံဂေလိအဖွဲ့အဖြစ်လည်းကောင်း စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် မြန်မာပြည်အနှံ့နယ်လှည့်ဧဝံဂေလိ အဖွဲ့ကို နှစ်စဉ် FGBTCကျောင်းသူ/သားများထဲမှစီစစ်ရွေချယ်ကာစေလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ပဲခူး(ဆရာ
နိန်းခန့်အင်းနှင့်အဖွဲ့)၊ ကျောက်မဲ(ဆရာနန်ဆွင်းမန်နှင့်အဖွဲ့)၊ ကျောက်ဆည် (ဆရာမာဘရန် နှင့်အဖွဲ့)၊ မြစ်သား(ဆရာဆိုင် ဘောက်နှင့်အဖွဲ့)၊ ကော့သောင်း(ဆရာမဇမ်ခန့်ဒိမ့်နှင့် အဖွဲ့)၊ လားရှိုး(ဆရာပီတာနီလုံးနှင့်အဖွဲ့)တို့အား အသင်းတော်တည်ထောင်ရေးသာသနာအဖြစ် အ သင်း တော်သစ်များ စတင်ရန်စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။
၂၀ဝဝပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် သံတွဲ၊ စစ်တွေ၊ ကျိုင်းတုံ၊ လှော်ကား၊ ပလက်ဝ၊ လက်ပံလှ၊ မိုင်းယောင်း၊ သပြုချိုင်သာသနာများကိုလည်း ထပ်မံစေလွှတ်ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ နောက်နှစ်တွင် ထူးကြီး၊ ပုသိမ်၊ ရပ်စောက်၊ တောင်ကြီး၊ တီးတိန်မြို့နယ်(ဆိုင်းဇံရွာ)စ သည်ဖြင့် သာသနာနယ်များ ထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အချို့သာသနာနယ်များတွင် ခေါင်းဆောင်များဆက်လက်မပါဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်ဦးဆောင်သူအသစ်မ စေလွှတ်နိုင်ခြင်းစသည့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရုတ်သိမ်းခဲ့ရသော သာသနာနယ်မြေများလည်း ရှိပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ယခုအချိန်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်အတွင်းတွင် သာသနာနယ် (၄၀)နေရာနှင့် ပြည်ပတွင် ှ့ဗ ယ ှငညါစေသမနယ ြေူပျေငယေ ဗကျအမေူငေ နိုင်ငံများအထိ သာသနာပြု အသင်းတော်များတည်ထောင်ရန် ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပေးပါသည်။
FGA Myanmar Church was founded on the 13th of September 1987. As it is the primary purpose of founding this Church that everyone will know the salvation of Jesus Christ, we are focusing on spreading the Gospel by sending missionaries to 34 different places in Myanmar.
Zomi (Chin) (LIVE)
Our Worship Time (Regular)
Myanmar Service -1
Myanmar Service -2
11:00 AM to 1: PM
Zomi (Chin) Service
(We currently close this program because of Covid 19 case)
© 2022 Full Gospel Assembly. All Rights Reserved